अहिले नै उत्साही हुन आवश्यक छैन : पोग्बा | Nagarik News - Nepal Republic Media
अहिले नै उत्साही हुन आवश्यक छैन : पोग्बा
१ माघ २०७७ २ मिनेट पाठ
मिडफिल्डर पाउल पोग्बाको निर्णायक गोलमा बर्नलीमाथि १–० को जित हात पार्दै म्यानचेस्टर युनाइटेड मंगलबार इङ्लिस प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ।
बर्नलीविरुद्ध सफलतापछि फ्रान्सेली स्टार पोग्बाले युनाइटेडको जितमा निर्णायक गोल गर्न पाउँदा सधैं खुसी हुने बताएका थिए। केही महिना अघि मात्र ओल्ड ट्राफोर्डमा पोग्बाको भविष्यबारे अन्योलमा रहेको समाचार बाहिरिएको थियो। तर, पछिल्ला समय भने उनले टोलीमा निरन्तर पहिलो रोजाइको रूपमा स्थान बनाइरहेका छन् र टोलीको जितमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। सन् २०१३ मा तत्कालीन प्रशिक्षक एलेक्स फर्गुसनले क्लब छोडेपछि युनाइटेडले प्रिमियर लिगको उपाधि जित्न सकेको छैन। यस सिजनमा भने युनाइटेडले आफूलाई प्रिमियर लिग दाबेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
ओले गनर सोल्सजायरको टोली १७ खेलबाट ३७ अंकका साथ लिग अंकतालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ, जुन समान खेल खेल्दै दोस्रो स्थानमा रहेको साबिकको विजेता लिभरपुलभन्दा तीन अंक बढी हो। प्रिमियर लिगका सर्वाधिक सफल टोलीका रूपमा रहेको युनाइटेड र लिभरपुल आइतबार एन्फिल्डमा आमनेसामने हुँदैछन्। ‘टोलीले स्पष्ट तीन अंक जोड्दा पनि खुसी छु,’पोग्बाले भने, ‘त्यो भन्दा खुसी टोलीको जितमा मलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्दा हुन्छ। टोलीको जितमा मेरो योगदान हुँदा अझ खुसी लाग्छ। हामी शीर्ष स्थानमा उक्लिएका छौं। तर हामी अहिले नै उत्साही हुन आवश्यक छैन, किनभने हामीले धेरै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी छ। साथै शीर्ष टोलीसँग खेल्न बाँकी नै छ।’ सिजनको सुरुआतमा ६ मध्ये दुई खेल मात्र जित्दै ६ अंक जोडेको युनाइटेडले पछिल्ला ११ खेलमा भने २९ अंक बटुलेको छ।
‘मैले सधैं भन्दै आएको छु, पोग्बा हाम्रो टोलीका लागि निकै महत्वपूर्ण खेलाडी हुन्,’सोल्सजायरले भने, ‘उनी अनुशासित खेलाडी र विश्वविजेता खेलाडी हुन्। अहिले हामीले पोग्बाको उत्कृष्ट लय देखिरहेका छौं। उनी प्रत्येक खेलमा उत्कृष्टभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्। १९औं मिनेटमा मार्कुस रासफोर्डको पासलाई पोग्बाले जाली चुमाउँदै युनाइटेडलाई अग्रता दिलाएका थिए। बर्नलीले भने अक्टोबरपछि पहिलोपटक घरेलु मैदानमा खेल गुमाएको हो।
‘अहिले टोली उच्च लयमा छ,’सोल्सजायरले भने, ‘हामी लिभरपुलविरुद्ध पनि स्पष्ट जितका साथ शीर्षतामा अग्रता बढाउन चाहन्छाैं।’ यता उल्भरह्याम्पटनमाथि २–१ को जितका साथ एभर्टन पनि शीर्ष चारमा फर्किएको छ।
प्रकाशित: १ माघ २०७७ ०९:४९ बिहीबार
प्रदेश २ प्रमुखद्वारा धनगढीमा आगलागी भएको फर्निचर उद्योगको निरीक्षण
प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख डा.राजेश अहिराज सुदूरपश्चिम प्रदेश भ्रमणको क्रममा धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ४ चटकपुरस्थित आगलागी भएकोे फर्निचर उद्योग स्थलमा पुगेका छन्।
इलामबाट ६१ किलोमिटरमै दमक
सदरमुकामनजिकै फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलबाट सिद्धिथुम्का–जितपुर–फुलुंगी–महमाई हुँदै मार्चेबुङसम्म ५५ किलोमिटरको सडक निर्माण सुरु भएको हो। स्थानीयका अनुसार मार्चेबुङबाट दमक बजार पुग्न ६ किलोमिटर छ। यो सडकले सुकिलुम्बा विमानस्थलबाट ६१ किलोमिटरमा दमक बजार छुने भएपछि स्थानीयसमेत हर्षित छन्।
‘नियात्रामा नौलो आयाम’ लोकार्पण
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस, नेपाली विभागको आयोजनामा डा. विदुर चालिसेद्वारा लिखित ‘नियात्रामा नौलो आयाम’ समालोचना पुस्तकको विमोचन गरियो । नेपाली विभागका अध्यक्ष डा. शैलेन्दुप्रकाश नेपालको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि क्याम्पस प्रमुख प्रा. घनप्रसाद पण्डित, विशेष अतिथि लघुकथा समाजका अध्यक्ष श्रीओम श्रेष्ठ ‘रोदन’, प्राडा कुमारप्रसाद कोइराला, डा. लेखप्रसाद निरौला, केशवप्रसाद चालिसे तथा कृतिका लेखक डा. विदुर चालिसेले बोलेका थिए ।